Fanalana ny pgcm : Azon’ny mpanatanteraka atao tsara -
AccueilRaharaham-pirenenaFanalana ny pgcm : Azon’ny mpanatanteraka atao tsara
Nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo no nisy ny didim-panjakana manaisotra ny filohan’ ny fitsarana an-tampony Ranary Robertson Rakotonavalona amin’ ny toerany, io izay fahefan’ ny mpanatanteraka tanteraka.
Mazava tokoa ny voalazan’ ny lalàna fa miainga avy eo anivon’ ny filankevitra ambonin’ ny mpitsara ny fanolorana soso-kevitra amin’ ireo izay hapetraka amin’ ny toeran’ ny PGCM, aorian’ ny fivoahan’ ny fiantsoana ireo izay vonona ho eo amin’ ny toerana, na ny “appel a candidature”, ary izay mahafeno ny fepetra ihany koa. Hatreto anefa dia tsy izay mihitsy no nataon’ ny filankevitry ny minisitra fa dia ny fanesorana fotsiny ihany ny filohan’ny fitsarana an-tampony, izay raha namaky tsara ny tatitry ny filankevitry ny minisitra ny rehetra dia tsy nahita fanendrena mihitsy izay hisolo ny PGCM nalana tao anatiny, fa miandry io lalan-jotra ambaran’ny lalàna io. Noho izany diso toerana ihany ny fanehoan-kevitra izay mivoaka ataon ny eo anivon’ny SSM, izay milaza fa fahefam-pitsarana ny fanolorana ny olona amin’ ny toeran’ ny PGCM izay mbola andrasan’ny fahefana mpanatanteraka hatramin’ izao.
Ny zava- misy izany amin’ izao fotoana izao dia miandry ny soso-kevitra avy amin’ ny CSM ho an’ izay olona hatolotr’izy ireo ho amin’ ny toerana ny minisitry ny Fitsarana hoentina eo hanaovana fanendrena eo anivon’ ny filankevitry ny minisitra, hatreto anefa dia mbola tsy naharahy anarana ny eo anivon’ ny minisiteran’ ny Fitsarana izay mbola miandry. Mba hanitsiana izay fanehoan-kevitra nataon’ ny filohan’ ny SSM, milaza fa tsy zon’ ny mpanatanteraka ny manaisotra amin’ ny toerana ny filohan’ny fitsarana tampony, dia indro hoentiny eto ny voalazan’ny lalàna “ Ny filohan’ny fitsarana an-tampony dia tendrena amin’ ny alalan’ ny didim-panjakana noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra. Ny minisitry ny Fitsarana aorian’ ny fakan-kevitra eo anivon’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara csm no mitondra izany eo anivon’ny filankevitry ny minisitra hanaovana ny fanendrena”. Noho izany mazava izany fa tsy misy resaka fanalana mihitsy, na fanesorana ny filohan’ ny PGCS anatin’io lalàna io fa kosa ny fanendrena, dia io mbola miandry ny soso-kevitra avy amin’ ny CSM io mba hanarahana amin’ ny antsakany sy andavany ny voalazan’ny lalàna.